၇၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ. အထူးဆောင်းပါးများ - Yangon Nation News
၇၃ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ. အထူးဆောင်းပါးများ , July 18, 2020
ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၏ မျိုးချစ်စိတ် နှင့် သမိုင်းမှတ်တိုင်များ ——————————————————————- မြန်မာပြည်ရဲ့ စာပေဟာ နိုင်ငံရေး ရေစီးကြောင်းတွေပေါ်မှာ လိုက်ပြီး ရှင်သန်နေရတာကြောင့် နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေ ဖြစ်တာနဲ့အမျှ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုလည်း ထိခိုက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာ နိုင်ငံရေးစာပေ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိစာပေတွေက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်...
တောင်တန်းဒေသ အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီး မိုင်းပွန်စော်ဘွား စဝ်စံထွန်း ——————————— ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ လုပ်ကြံမှုကြောင့် အဲဒီတုန်းက အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၇ ဦး ကျဆုံး ကွယ်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ အခင်းဖြစ်ပြီး ၂၅...
တကယ့်အာဇာနည် မန်းဘခိုင် ————————————- အာဇာနည်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို မြန်မာအဘိဓာန်က “၁၊ အကြောင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို ကောင်းစွာသိသူ။ ၂၊ သာမန်ထက် လက်ရုံးရည် နှလုံးရည် ထူးကဲသာလွန်၍ အများအကျိုးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူ။” လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ ကရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီး မန်းဘခိုင်က...
ဦးရာဇတ်၏ လေးစားဖွယ်စိတ်ဓာတ် ——————————————— ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်အကြောင်းကို လေ့လာတဲ့အခါ အခွင့်အရေးကို မမျှော်လင့်ဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာက တာဝန်ယူတတ်တဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို တွေ့နိုင်သလို ကိုယ်ကျိုးစွန့်လွှတ်နိုင်မှုတွေကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို ပညာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးအသိ...
စံပြုပုဂ္ဂိုလ် အာဇာနည် သခင်မြ ——————————– မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းအတွင်း ထင်ရှားတဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်တွေ ပေါ်ထွန်းခဲ့သလို သစ္စာဖောက်တွေ၊ အလိုတော်ရိတွေလည်း အများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေများအတွင်း ကိုယ်ကျိုးရှာသူ၊ နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်း သွေဖည်သွားသူ တချို့ရှိခဲ့ပေမယ့် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး၊ ပြည်သူတရပ်လုံးကောင်းစားရေးကို...
ရိုးသားပြီး ရာထူးမမက်သော ဦးဘဝင်း —————————————- ဦးဘဝင်းကို ဗိုလ်ချုပ်ဆောင်ဆန်းရဲ့အစ်ကို၊ ဗိုလ်ချုပ်အစ်ကိုလို့ နာမ်စား သုံးကြတာမို့ ဗိုလ်ချုပ်တို့နဲ့ဆက်စပ်နေရတဲ့သဘော၊ ဗိုလ်ချုပ်ကို မှီပြီးတော့မှ သိရတဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဦးဘဝင်းဟာ သူ့ထက်ငယ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တို့ ညီအစ်ကိုတွေကို စောင့်ရှောက်ခဲ့သူ၊...